Kem dưỡng da tuổi dậy thì là gì? 10 sản phẩm tốt nhất bạn nên chọn | Muasalebang - Muasalebang
Kem dưỡng da tuổi dậy thì là gì? 10 sản phẩm tốt nhất bạn nên chọn | Muasalebang
Đang Đọc: Kem dưỡng da tuổi dậy thì là gì? 10 sản phẩm tốt nhất bạn nên chọn | Muasalebang in Muasalebang
Ngesikhathi sokuthomba, isikhumba sakho sibhekana nezinkinga ngesimo sesikhumba. Isikhumba sakho sizoqala ukuba nezinduna, izimbotshana ezinkulu, isikhumba esomile, ukukhanya okunamafutha… Ngalesi sikhathi, uyohlale uzizwa unecala futhi unecala.
Abaningi benu bazothola imikhiqizo yokwelapha ekhethekile yokuthuthukisa isikhumba sakho, kodwa ngaphandle kwalokho, ngincoma ukuthi futhi udinga ukusebenzisa ama-moisturizers esikhumbeni.
Lapho usemncane, isikhumba sakho besingagugi, kufanele uvikele futhi unakekele isikhumba sakho ngokucophelela, ungagcini nje ngokungakunaki ukunakekelwa kwesikhumba ngezinhlobo ezahlukene zemikhiqizo yokunakekela isikhumba. ukhilimu wesikhumba wokuthomba Ngiyacela! Ake sibheke eminye yemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba ehamba phambili nefanele namuhla.
1 Yini ukhilimu wesikhumba sokuthomba?
1.1 1. Hada Labo Perfect White Cream
1.2 2. I-INNISFREE GRAREEN TEA BALANCING CREAM EX
1.3 3. I-Innisfree Jeju I-Innisfree Cherry Blossom Tone Up Cream
1.4 4. Lagivado Heavenly Face Cream Korean Brightening Moisturizing Cream
1.5 5. I-Vitamin Acnes I-Vitamin Cream
1.6 6. I-Thorakao Lemon Whitening Cream
1.7 7. Izinduna Pure White Cream
1.8 8. I-Pond’s Flawless Radiance Derma+ Day Cream
1.9 9. Kb One Vip Skin Whitening Cream
1.10 10. Ukhilimu wasebusuku omhlophe we-SENNIO
Yini ukhilimu wesikhumba sokuthomba?
Ingabe ukhilimu wesikhumba muhle? Hlobo luni lukakhilimu okufanele lusetshenziswe ngesikhathi sokuthomba?… Futhi kuphakama inqwaba yemibuzo engqondweni lapho abantu abasha kancane kancane bekhathazeka ngesimo sesikhumba sabo. Ake sizwe ngalokhu nathi!
Eminyakeni ngayinye, isikhumba sakho sizobonisa izimpawu ezihlukene zesimo sesikhumba. Uma kuziwa ekuthombeni, lesi yisikhathi lapho isikhumba sinezinkinga eziningi. Ngakho-ke, ingabe abantu abasha kufanele basebenzise imikhiqizo yobuso emanzisa futhi ebenza babe mhlophe ngesikhathi sokuthomba? Sicela uthathe isikhashana ufunde isihloko esigcwele ngezansi!
Ithiphu elincane kinina ukuthi ukunakekela isikhumba ngaphandle kukodwa akwanele. Uma ufuna ukuba nesikhumba esihle, kufanele unakekele isikhumba sakho ngaphakathi ekujuleni. Futhi kusukela manje kuqhubeke, ake siqale ngokuzijwayeza ukudla okunomsoco kanye nemisebenzi yokuphila.
Xem Thêm Top 10 serum trị mụn ẩn tốt nhất giúp giảm mụn hiệu quả | Muasalebang
1. Hada Labo Perfect White Cream
Isikhumba esibushelelezi, ngisho nethoni yesikhumba, siswakamisa ngokujulile nge-Arbutin ne-HA
Abunatshwala, ayinaphunga, ayinambala, ayinawo uwoyela wamaminerali, i-pH ibhalansisiwe
Ngomlayezo othi “Isikhumba Esimhlophe Esiphelele”, uhla olusha olumhlophe lwe-Hadalabo Perfect White lunikeza isisombululo sesikhumba esimhlophe esibushelelezi – ngisho nombala – omswakama ojulile; ngakho-ke ungaba nesikhumba esibushelelezi, esikhazimulayo ngokuzethemba.
2. I-INNISFREE GRAREEN TEA BALANCING CREAM EX
Isikhumba sakho sizoba manzi ngokwanele, futhi i-green tea essence iphinde isize ukulawula uwoyela oweqile esikhumbeni, ikakhulukazi ku-T-zone, okukhawulela isizukulwane sezinduna.
Isiza ukulinganisa inani lamanzi kanye nemisoco yesikhumba ukusiza isikhumba sibukeke sinempilo futhi siqinile
I-Innisfree Green Tea Balancing Cream EX ukhilimu oneziqephu zetiye eziluhlaza ezikhuliswe futhi zakhiqizwa ngaphansi kwenqubo evaliwe e-Jeju Island. I-essence ikhulisa futhi ithambisa isikhumba ngemuva ngembewu yetiye eluhlaza kanye namaqabunga agaywe ngqo ngemva kokuvuna. Lo khilimu ufanelekile isikhumba esihlangene nesinamafutha.
Uma ubulokhu uzibuza ukuthi isikhumba sakho sihlala sinzima ukulawula inani lamafutha akhiqizwe noma alimala kalula futhi alinawo umswakama owanele, manje I-Innisfree Green Tea Balancing Cream ingakusiza ukuthi ubuyise isikhumba sakho. Uma isikhumba sakho sinezinduna, kuzonciphisa ukuvuvukala ngokushesha.
3. I-Innisfree Jeju I-Innisfree Cherry Blossom Tone Up Cream
Ukhilimu othambisayo nocwebezelayo, awusomisi futhi awubumbe isikhumba
Ukuthungwa okuzacile, ukumuncwa okusheshayo, ukwelashwa kwethoni yesikhumba esifiphele.
Ifanele isikhumba esihlangene, isikhumba esinamafutha
Inamandla okwenza mhlophe, iphakamise ngokushesha ithoni yesikhumba, yenza isikhumba sibe mhlophe, pink futhi sikhazimule ngendlela yemvelo.
Isithako esiyinhloko ukukhishwa kweqabunga le-cherry blossom kanye nesithako esithambisayo se-betaine esikhishwe ku-beetroot sisiza ukukhanyisa isikhumba ngokushesha.
Lezi yizindaba ezinhle ngempela zamantombazane afuna umugqa wokwenza mhlophe kwesikhumba kanye nemikhiqizo ethambisayo. Ikakhulukazi uma kunomugqa womkhiqizo wokuthuthukisa ithoni yesikhumba osheshayo nomkhiqizo.
Ikakhulukazi uma ngephutha ungumnikazi wesikhumba esizwelayo kodwa usafuna ukwakheka okuthambile okunekhono lokunwebeka ngokwemvelo futhi ukhanyise isikhumba ngokuphepha, lokhu kuzoba isiphakamiso esiphelele.
Isithako esiyinhloko amaqabunga e-cherry blossom e-Jeju Island anokuqukethwe okungu-120ppm ukusiza ukugqama nokwenza isikhumba sibe mhlophe.
I-Betaine ekhishwe ku-beetroot inikeza umswakama esikhumbeni, isenze sithambile, singabi lukhuni
I-Niacinamide – uhlobo lwevithamini B3, isiza ukubhekana nesikhumba esifiphele, esingalingani.
Ukwakheka kusesimweni sikakhilimu, othambisa isikhumba kodwa angashiyi isikhumba sinamathela noma sinamafutha.
Khanyisa, khanyisa futhi ithoni yesikhumba ilingane
Yondla futhi ithambisa isikhumba
Thuthukisa umbala wesikhumba, wenze isikhumba sinwebeka futhi siqine
Ngokushesha futhi ngokwemvelo isikhumba esikhazimulayo
Ingena kalula esikhumbeni, hhayi isikhumba esinamafutha, esipholile futhi esikhululekile
Amantombazane afuna ukwenza lula izinyathelo zokwakheka angasebenzisa umkhiqizo njenge-primer.
Kulabo abanesikhumba sezinduna, ungasebenzisa umkhiqizo njengokhilimu wokwenza izimonyo, kokubili ngokuphepha nangokuphelele
Thatha inani elanele likakhilimu futhi usabalalise ngokulinganayo ebusweni ngemva kwesinyathelo sokugcina sokunakekelwa kwesikhumba, bese ukwazi ukwenza izimonyo ezinganaki noma usebenzise i-sunscreen eyengeziwe.
4. Lagivado Heavenly Face Cream Korean Brightening Moisturizing Cream
Iphunga elimnandi, elimunca ngokushesha, alibangeli ukucasuka kwesikhumba
Gcina isikhumba sibushelelezi, uvimbele ukuguga
I-moisturizes ngokuphumelelayo futhi ivale umswakama
Idala umgoqo wesikhumba ovikelayo, awubangeli ukucasuka.
Ukhilimu ucinene, mncane, ukhanyayo, unomoya, futhi uphakamisa ithoni yesikhumba.
Faka esikhumbeni, hhayi amafutha futhi acwebezelayo.
Ukhilimu wobuso baseKorea I-Lagivado Heavenly Face Cream inokumunca ngokushesha, ayinamafutha, isebenzisa ifomula ephephile, enempilo, isiza ukuthambisa isikhumba futhi yandise umswakama wesikhumba.
I-Trehalose: ushukela wemvelo othuthukisa amandla amaseli omzimba
I-GlycerinSodium: igcina umgoqo wesikhumba wangaphandle, ivimbela isikhumba esomile, ukuqubuka
I-HA: inyusa amandla esikhumba okugcina umswakama ngo-1000
5. I-Vitamin Acnes I-Vitamin Cream
Isikhumba esikhanyayo nesibushelelezi; qina; ama-acne blemishes awabonakali kancane
Inikeza amavithamini angu-6 abalulekile nama-amino acid ukuze ondle futhi abuyisele isikhumba ngemva kwezinduna
Ukhilimu ophuza ngokushesha; hhayi amafutha
Izinduna zenza amangqamuzana nezicubu zonakaliswe ngokuqhubekayo, ukwakheka kwesikhumba kuyancipha ukunwebeka, kubi futhi kungakhanyi. Ukunciphisa lokhu, i-Acnes Vitamin Cream inikeza amavithamini angu-6 abalulekile nama-amino acids ukondla nokubuyisela isikhumba ngemva kwezinduna. Ukhilimu uthatha ngokushesha, hhayi amafutha. Ngesikhathi esifanayo, sondla futhi sivuselela isikhumba ngemva kwe-acne: isikhumba sikhanya, sibushelelezi, siqinile, amabala amnyama amnyama kakhulu.
Indlela yokusebenzisa: Ngemva kokuhlanza, thatha inani elifanele likakhilimu futhi uligcobe ngokulinganayo ebusweni nasentanyeni, ikakhulukazi isikhumba esimahhadlahhadla, esibuthuntu ngemva kwezinduna. Gcoba ngobumnene ukhilimu esikhumbeni. Sebenzisa nsuku zonke ekuseni nasebusuku ukuze uthole imiphumela engcono kakhulu
Sebenzisa ngokuhambisana ne-Acnes Vitamin Cleanser ukuze uphumelele kakhulu.
6. I-Thorakao Lemon Whitening Cream
Hlanza ngokujulile, susa isikhumba esifiphele, esimnyama
Khiqiza kabusha isikhumba esisha esimhlophe, esikhanyayo, esisha
Vimbela ukunqwabelana kwe-sebum, vimbela izinduna zesikhumba
Igcwalisa umswakama ukuze igcine isikhumba sithambile futhi sithambile
Ukhilimu awugcini isikhumba, awubambeli ilanga
I-THORAKAO Lemon Skin Whitening Cream inamandla okuhlanza ijule ngaphansi kwe-epidermis futhi isuse isikhumba esimnyama, esimnyama. Ukhilimu usiza ukuvuselela isikhumba esisha esimhlophe nesikhanyayo futhi uvimbele ukunqwabelana kwe-sebum ebangela induna. Ikakhulukazi ukhilimu awubangeli ukuncipha kwesikhumba noma ukushisa kwelanga.
I-THORAKAO Lemon Skin Whitening Cream, ngaphezu kwe-lemon ekhishwe, iphinde ihlanganiswe nezikhishwe zemvelo ezimhlophe zesikhumba ezivela ezimpandeni zikaMulberry kanye ne-White Chamomile ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kahle okuphezulu kwesikhumba esimhlophe esikhanyayo.
7. Izinduna Pure White Cream
Kwandisa ukukhiqizwa kwamaseli esikhumba amasha
I-Anti-oxidant, ivimbela ukwakheka kwe-melanin
I-epidermis yesikhumba esondlayo
Ubuchwepheshe bokwenza ubumhlophe obuvela ku-Acnes bucwaningwa ngokusekelwe ekhonweni lesikhumba lokuzivuselela kanye nokubuyisela, ukuhlanganisa ngempumelelo izithako ezenziwe ngokukhethekile, ukondla isikhumba esikhanyayo, esibushelelezi esivela ngaphakathi.
I-epidermis yesikhumba esondlayoKwandisa ukukhiqizwa kwamaseli esikhumba amasha
I-epidermis yesikhumba esondlayoOkumhlophe + Okuyinkimbinkimbi : Inkimbinkimbi ye-C-Booster ne-Alpinia White evela emvelweni isiza ukuvimbela i-oxidation, ukunciphisa ukwakheka kanye nokufiphala kwe-melanin pigment ekhiqizwa ungqimba oluyisisekelo lwe-epidermis, isikhumba esimhlophe esibushelelezi futhi ivimbe imiphumela yemisebe ye-UV esikhumbeni.
I-AHA ne-BHA: Geza i-sebum eningi kanye nokungcola, ususe ngobumnene ungqimba oludala lwezimpondo, uvimbele ngempumelelo amagciwane wezinduna.
I-HA (Haluronic Acid): Inikeza umswakama odingekayo, isiza ukwandisa ukunwebeka, esikhumbeni esimanzi, esinempilo.
Sebenzisa ngokuhambisana ne-Acnes Pure White Cleanser ukuze kube mhlophe okusebenzayo.
8. I-Pond’s Flawless Radiance Derma+ Day Cream
Ukhilimu wokulawula uwoyela
Ifanele isikhumba esivamile nesinamafutha
I-Pond’s Flawless Radiance Derma+ Matifying Day Cream SPF 15 PA+++ (50g) iqukethe i-DermPerfect 5% complex eklanywe i-Pond’s Research Institute ukuze uthole imiphumela efana nenhlanganisela yobuchwepheshe be-LASER, IPL, GLUTA obu-3 ukuletha isikhumba esimhlophe njengokunakekelwa esaluni.
Ubuchwepheshe be-LASER: Isusa amabala ansundu ukusiza ukunciphisa amabala amnyama.
Ubuchwepheshe be-IPL: Nciphisa izimbotshana zesikhumba esibushelelezi.
Ubuchwepheshe be-GLUTA: Ivimbela ukukhiqizwa kwe-melanin esikhumbeni esimhlophe esibushelelezi.
Kufakazelwe ngokomtholampilo ukuletha imiphumela engcono efika ku-4x kunokusebenzisa ubuchwepheshe be-IPL.
Abasebenzisi abangu-95% babone ukuncipha kwamabala amnyama, abasebenzisi abangu-93% babone ukuncipha kwezimbotshana futhi u-84% wabasebenzisi babone isikhumba esikhazimula kakhulu (ngemuva kwamaviki angu-8 okusetshenziswa).
9. Kb One Vip Skin Whitening Cream
Yenza isikhumba sibe mhlophe futhi ufiphale amabala amnyama, wehlise amakhanda amnyama, wehlise uwoyela futhi uvimbele izinduna
Isikhumba esikhanyayo, esibushelelezi, futhi esisemusha
Inikeza umsoco esikhumbeni, ukuqina okuphelele
Nge-super anti-acne Pea Essence, i-oats namavithamini namakhambi anomphumela wokunciphisa i-sebum, anti-inflammatory, bactericidal & ukususa izinduna …
Isithako se-Natural Pearl, sisiza ukuqinisa izimbotshana ukuze wenze isikhumba sakho sibe bushelelezi futhi sibe bomvu bemvelo futhi sibe mhlophe.
Iqeda amabala amnyama ashiywe izinduna. Inikeza umswakama esikhumbeni, ibuyisele isikhumba esonakele, ithuthukise isikhumba esishiywe izibazi, ishwabene nezimbotshana, ikhuthaze ukuvuselelwa kwamaseli esikhumba…
Thuthukisa ukuba nesikhumba esimhlophe esikhanyayo ukuze sikusize uzethembe.
I-sunscreen SPF 30+ ivikela isikhumba elangeni.
I-Cream texture liquid, imunca ngokujulile, ayinamafutha, Ayicunuli, ifanele zonke izinhlobo zesikhumba, okuhlanganisa nesikhumba esibucayi.
10. Ukhilimu wasebusuku omhlophe we-SENNIO
Ikhono elivelele lokuthambisa.
Ibhalansi yomswakama efanelekile yazo zonke izimo zesikhumba ukuze isikhumba esibushelelezi, esithambile ngokushesha.
Ivuselela amangqamuzana amasha ukuze akunike isikhumba esisha, esibushelelezi.
Ikhono elivelele lokuthambisa. Ibhalansi yomswakama efanelekile yazo zonke izimo zesikhumba ukuze isikhumba esibushelelezi, esithambile ngokushesha. Ivuselela amangqamuzana amasha ukuze unikeze isikhumba esisha, esibushelelezi. Thuthukisa ikhono lokuvuselela nokulungisa umonakalo esikhumbeni Thuthukisa ukunwebeka, sula imibimbi ejulile esikhumbeni. Umbala wesikhumba uthuthukisiwe, isikhumba siba mhlophe futhi sibe mhlophe. Idala ifilimu ethambisayo ukuze ivikele ubuso besikhumba ebusuku esikhumbeni esisha, esinempilo.
Ngenhla uhlu lwemikhiqizo engu-10 yokunakekelwa kwesikhumba yokuthomba ephumelela kakhulu namuhla. Ngethemba ukuthi izihloko ezimbalwa zizoba iziphakamiso eziwusizo kuwe. Uma udinga ukuxoxa nokuhlola, sicela usebenzise isigaba sokuphawula esingezansi.
Top 6 Collagen dạng bột loại nào tốt, hiệu quả nhất hiện nay | Muasalebang
Cách cập nhật iOS 13 đơn giản nhanh nhất cho iPhone, iPad OS | Muasalebang